Xildhibaan Caana oo loogu baaqay in uu isku soo taago Gudoomiyaha Golaha Shacabka!
Friday April 13, 2018 - 23:42:32 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Iyadoo lagu wado dhawaan in Musharaaxin baddan isku soo taagan qabashada xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia, lana doorto guddoomiyaha baarlamaanka kadib markii uu xilkaasi iska casilay Prof: Jawaari ayaa Jaaliyadaha dibada iyo Xildhibaanadda qaar
Iyadoo lagu wado dhawaan in Musharaaxin baddan isku soo taagan qabashada xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia, lana doorto guddoomiyaha baarlamaanka kadib markii uu xilkaasi iska casilay Prof: Jawaari ayaa Jaaliyadaha dibada iyo Xildhibaanadda qaar waxaay ku baaqeen in xilkaasi isku sharaxo qof u qalma.
Xildhibaano, siyaasiyiin, aqoon-yahanno, haween iyo dhallinyaro kasoo jeeda deegaannada Koonfur-galbeed, ayaa ugu baaqay Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yaroow in uu isku soo sharxo guddoomiyaha baarlamaanka .
Sidoo kale Siyaasiyiintii, iyo Aqoonyahanada deeganada koonfur Galbeed ka soo jeeda kuna dhaqan dalka dibadaiisa ayaa baaq kaas lamid ah u diray Aqoon yahan Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yaroow inuu isku soo sharaxo xilka Guddoomiayaha Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanada qaar ee damaca ugu jiro in aay isku sharaxan Xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa lagu dhaliilayay in aay aynaan ka warqabin deeganadii laga soo doortay hadii aay isku sharaxana Hogganka Baarlamaanka Soomala, oo kamid ah sedaxda awood ee dalka ugu sareeysa in aay ku fashilmi doonaan haatana loo baahan yahay shaqsiga la taageerayo in laga fiirsado.
Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yaroow oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka ayaa ah shaqsi xilal kala duwan ka soo qabtay dalka waana shaqsi degan qibrad iyo waaya aragnimo Siyaadeed leh sidoo kalane Xildhibaanada Baarlamaanka ku dhex leh saaxibo baddan laguma xanto in koox gaara uu ka tirsan yahay wuxuna necab yahay khilaaf iyo is qab qabsi.